तीजको दिन कतिमा कारोबार हुँदैछ सुन? - Everest Dainik - News from Nepal
तीजको दिन कतिमा कारोबार हुँदैछ सुन?
काठमाडौंः हरितालीका तीजको दिन आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमवार छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार पनि सुन त्यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, सोमबार तेजावी सुन ७१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनचाँदी?
चाँदी प्रतितोला ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । आइतवार पनि चाँदी सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
ट्याग्स: तीज, सुन, सुनचाँदी